Pôetawebs feno sivy taona
P O E T A W E B S
Feno sivy taona ankehitriny ny Pôetawebs, tranonkala entina anandratana ny Poety sy ny poezia malagasy. Tamin'ny 30 avrily 2009 mantsy no nivoahan'ny "Aingam-panahy", lahatsoratra voalohany tao amin'io tranonkala io izay nosoratan'i Fredy Jaofera.
Rehefa nandinika sy namakafaka i Toetra Ràja fa tokony hisy ny sehatra manokana tsy iresahana afa-tsy ny tontolon'ny pôezia eto amin'ny aterineto dia nanapa-kevitra izy roalahy fa hatsangana ny tranonkala.
Ahitana efitra efatra tsikaritra hatrany am-boalohany ny trano.
Itafatafana amin’ny Poety sy ireo olona fantatra fa manan-kolazaina momba ny Poety sy ny poezia. Anjatony ireo efa nivahiny tao toa an’i Ampamoha (Wilson Razafiarivony), AéRa (André Rakotondranaivo), Om-Gui (iray andro talohan’ny nahafatesany), Niry-Solosoa sns.
Efitra fanadihadiana ny atin'ny tononkalo, fandalinana ny tontolony ary fanaposahana ny mombamomba ny Pôety. Mampiely biografia iray isam-bolana ny Pôetawebs.
Fitaterana ny hetsika tononkalo toy ny antsa sy ny tsangan-tononkalo mba ho hitan'ny besinimaro.
Efitra itoeran'ny vaovao samihafa toy ny boky vao nivoaka, velakevitra...
Valo mianadahy ankehitriny ireo mpiara-misalahy ao aminy: Hajaina, Ikaloyna Vony, Léa Fandresena, Hanitr'Ony, Doda Razafindravelo, Heriarilala Andriamamonjy, Toetra Ràja ary Tsikimilamina Rakotomavo. Na dia poety avokoa aza izy ireo dia samy mivelatra amin’ny sehatra samihafa amin'ny lafin'ny soratra sy teny: Akademisianina, Mpikaroka, Tomponandraikitra ao amin’ny Ministeran’ny Kolontsaina, Mpanao gazety, Mpikabary, Mpampianatra teny malagasy sns.